Niverina tany Italia ny Cabo Verde Airlines
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Niverina tany Italia ny Cabo Verde Airlines
Ny Cabo Verde Airlines dia manohy ny asany any Italia amin'ity fahavaratra ity, miaraka amin'ny fifandraisana amin'ny nosy Sal sy toeran-tany hafa tantanan'ny kaompaniam-pitaterana.
Araka ny antontan-taratasy nomen'ny ENAC, National Aviation Entity, Cabo Verde Airlines dia hanohy ny asany ho an'ny seranam-piaramanidina Milan Malpensa sy Roma Fiumicino manomboka ny 254 Jona ka hatramin'ny 26 Oktobra.
Ny fifandraisana, miaraka amin'ny fandaharana voalahatra ho an'ny vanim-potoana 2019 eo anelanelan'ny Italia sy Cabo Verde, dia hanana fifandraisana amin'i Sal Island sy ireo toeran-tsoa hafa an'ny orinasa.
Ny zotram-piaramanidina dia hanana refesina isan-kerinandro miaraka amin'ny sidina mankany Sal-Malpensa ny Alatsinainy / Alakamisy / Zoma / Alahady ary Malpensa-Sal ny Alatsinainy / Alakamisy / Zoma ary Alahady.
Ary koa, i Sal-Rome dia hiala amin'ny talata / alarobia / asabotsy ary Roma-sal ny talata / alarobia / sabotsy.
Ny zotram-piaramanidina dia hiasa araka ny fahazoan-dàlana ara-teknika navoakan'ny EASA European Aviation Security Agency ho fetrany, raha azo ampiharina.
Talen'ny varotra vaovao voatondro ho an'ny The Kartrite Resort & Indoor Waterpark